Uganda - Wikipedia
Jamhuri ya Uganda
National motto: For God and My Country
Uganda inyika yakakomberedzwa nedzimwe iri kumabvazuva kweAfrica. Uganda inoganhurana nenyika dzinoti: Kenya iri kumabvazuva; South Sudan iri kumaodzanyemba; Democratic Republic of the Congo iri kumadokero; Rwanda iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero uye Tanzania iri kuchamhembe.
Kuchamhembe kwenyika iyi kunobatanidzira chikamu chikuru cheNyanza Victoria iyo ine zvikamu muKenya neTanzania; izvi zvoreva kuti Uganda iri muDunhu reNyanza Huru dzeAfrica. Uganda iri munzvimbo inobva mvura yeRwizi Nile uye matunhu ayo ane mamiriro ekunze akatsaukana asi achienderana nepairi pane muenzanisi.
Zita rokuti Uganda rinobva paUshe hweBuganda, hunobatanidzira chikamu chikuru chekuchamhembe kwenyika zvichisanganisira gutaguru reKamapala. Mutauro wekumahofisi ndiyo English. Mutauro weLuganda wakatekeshera nenyika yose uye kune mimwe mitauro mizhinji inosanganisira Swahili. Mutungamiri wenyika pari zvino (2021) anonzi Yoweri Kaguta Museveni uyo akatora chigaro nechisimba mugore 1980.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Uganda&oldid=86442"
Last edited on 9 Chikumi 2021, at 22:59
This page was last edited on 9 Chikumi 2021, at 22:59.